Fepetra sy fepetra
Ny Serivisy, ny tranokala, ary ny fampahalalana sy / na atiny rehetra hitanao, henonao na iainanao amin'ny tranokala (ny \_"Atiny\_") dia arovan'ny Shina sy ny zon'ny mpamorona iraisam-pirenena, ny mari-barotra ary ny lalàna hafa, ary an'ny Chipsmall na ny ray aman-dreniny. , mpiara-miasa, mpiara-miasa, mpandray anjara na antoko fahatelo. Chipsmall dia manome fahazoan-dàlana manokana, tsy azo afindra, tsy irery hampiasa ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny hanonta, hampidina ary hitahiry ny ampahan'ny votoatiny izay nofidinao, raha toa ianao ka: (1) ireto kopian'ny ny atiny ho an'ny tanjon'ny orinasanao anatiny na ny fampiasanao manokana, tsy arahin'antoka; (2) aza adika na alefa ny atiny amin'ny solosaina tambajotra na mandefa, mizara, na mandefa ny atiny amin'ny haino aman-jery rehetra; (3) aza manova na manova ny atiny amin'ny fomba rehetra, na mamafa na manova ny zon'ny mpamorona na ny mari-pamantarana. Tsy misy zo, lohateny na fahalianana amin'izay atiny na fitaovana alaina alaina izay nafindra ho anao vokatr'ity fahazoan-dàlana ity. Chipsmall dia miaro ny lohateny feno sy ny zon'ny fananana ara-tsaina feno amin'ny atiny rehetra alainao avy amin'ny tranokala, miankina amin'ity fahazoan-dàlana voafetra ho anao hampiasainao manokana ny atiny araka ny voalaza eto. Azonao atao ny tsy mampiasa marika na sary famantarana hita manerana ny tranokala raha tsy milaza fanekena an-tsoratra avy amin'ny tompona mari-pamantarana, afa-tsy izay avelan'ny lalàna manan-kery. Mety tsy hitaratra, hikaoka, na handrafitra ny pejy fandraisana na pejin-tranonkala hafa amin'ity tranokala ity amin'ny tranokala na pejin-tranonkala hafa ianao. Mety tsy hampifandray \_"rohy lalina\_" amin'ny tranokala ianao, izany hoe mamorona rohy mankamin'ity tranonkala ity izay mandingana ny pejy fandraisana na faritra hafa amin'ny tranokala raha tsy mahazo alalana voasoratra.
2. Fialana andraikitra amin'ny Warranty.
Chipsmall dia tsy manome fiantohana na fanehoana an-tsoratra momba ny vokatra rehetra, na momba ny tranokala, ny serivisy na ny atiny. Chipsmall dia manilika amin'ny fomba mazava ny karazan-dàlana rehetra na inona na inona karazana, maneho, milaza hevitra, ara-dalàna na amin'ny fomba hafa, anisan'izany, saingy tsy voafetra amin'ny, fiantohana ara-barotra azo antoka, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, lohateny ary tsy misy fanitsakitsahana ny vokatra, ny tranonkala, ny serivisy , ary ny atiny. Chipsmall dia tsy manome antoka ny amin'ny asan'ny tranokala na ny serivisy tsy ho tapaka, ara-potoana, azo antoka na tsy misy hadisoana, na izay lesoka ao amin'ilay tranokala na ahitsy ny serivisy. Chipsmall dia tsy manome antoka ny maha-marina na feno ny atiny, na koa ny fanitsiana izay lesoka ao anaty atiny. Ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny dia omena amin'ny fototra \_"As is\_" sy \_"raha misy\_". Ao Chipsmall, ny adiresy IP mpitsidika dia nojerena matetika sy dinihina mba hanarahana maso sy hanatsara ny tranokalanay fotsiny, ary izy ireo Tsy hozaraina ivelan'ny Chipsmall isika, mandritra ny fitsidihan'ny tranonkala iray, azonay atao ny mangataka aminao ny mombamomba ny fifandraisana (adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, nomeraon-fax ary adiresy fandefasana / faktiora). Nangonina an-tsitrapo ity fampahalalana ity — ary ankatoavanao ihany izany.
Raha sendra izany, Chipsmall dia tsy tompon'andraikitra amin'ny mpividy na amin'ny antoko fahatelo raha misy ny fahavoazana tsy mivantana, sendra, manokana, vokany, manasazy na ohatra (anisan'izany ny ferana tsy mahazo tombony, tahiry very, na fahaverezan'ny asa aman-draharaha) mipoitra avy na mifandray to; (I) Izay vokatra na serivisy omena na omen'i Chipsmall, na ny fampiasana ny tsy fahafahany mampiasa izany; (II) Ny fampiasana na tsy fahafaha-mampiasa ny tranokala, ny serivisy, na ny atiny; (III) Izay fifanakalozana natao tamin'ny alàlan'ny fanamorana ny tranokala; (IV) Izay fitarainana azo avy amin'ny hadisoana, fanesorana, na tsy fahatomombanana hafa tao amin'ilay tranokala, ny serivisy ary / na ny atiny; (V) Fandraisana tsy ara-dalàna na familiana ny fampitana na data-nao; (VI) Fanambarana na fitondran-tenan'ny antoko fahatelo amin'ny tranokala na serivisy; (VII) Ny raharaha hafa mifandraika amin'ny vokatra, ny tranokala, ny serivisy na ny atiny, na dia notoroana hevitra momba ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany aza i Chipsmall.
Ny adidin'i Chipsmall irery sy ny adidiny amin'ny lesoka vokatra dia, amin'ny safidin'i Chipsmall, hanolo ny vokatra tsy mety toy izany na hamerina amin'ny mpanjifa ny vola aloan'ny mpanjifa ka tsy misy ny trosa Chipsmall mihoatra ny vidin'ny fividianan'ny mpividy. Ny vahaolana etsy ambony dia iharan'ny fampandrenesan'ny mpividy ny lesoka sy ny fiverenan'ny vokatra tsy mandeha ao anatin'ny enim-polo (30) andro aorian'ny fividianana. Ny fanafody etsy ambony dia tsy mihatra amin'ny vokatra izay nanjary nampiasaina tamin'ny fomba ratsy (anisan'izany ny tsy ferana ny statika), ny fanaovana tsirambina, ny lozam-pifamoivoizana na ny fanovana, na ny vokatra izay nopetahana na novana nandritra ny fivorian'ny, na raha tsy izany dia tsy afaka nosedraina. Raha tsy afa-po amin'ny tranokala ianao, ny serivisy, ny atiny, na miaraka amin'ny teny fampiasana, ny vahaolana tokana sy tokana anao dia ny fampijanonana ny fampiasana ny tranokala. Manaiky ianao, amin'ny fampiasanao ny tranokala, fa mety hampidi-doza anao ny fampiasanao ilay tranonkala.
Ny baiko rehetra napetraka tamin'ny alàlan'ny tranokala na amin'ny alàlan'ny katalaogim-pirinty dia miankina amin'ny fehezan'ity fifanarahana ity, anisan'izany ireto fepetra manaraka ireto. Tsy misy fanovana, fanovana, famafana na fanovana ny iray amin'ireo fifanarahana ity avela tsy misy alalana voasoratra avy amin'ny solontenan'ny Chipsmall nahazo alàlana. Izay fanovana heverina fa natolotry ny mpividy amin'ny rakitra fanampiny dia lavina miharihary izao. Ny baiko napetraka amin'ny endrika misintaka amin'ireo fepetra sy fepetra ireo dia azo ekena, fa noho ny antony hanjakan'ny fifanarahana fotsiny.
1. Fanamarinana sy fanekena ny filaminana.
Rehefa mametraka kaomandy ianao, dia azonay atao ny manamarina ny fomba fandoavam-bola, ny adiresy fandefasana ary / na ny laharana fanamarinana tsy andoavan-ketra, raha misy izany, alohan'ny hanodinana ny kaomandinao. Ny fametrahana baiko amin'ny alàlan'ny tranokala dia tolotra hividianana ny vokatray. Chipsmall dia mety hanaiky ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fandoavanao sy ny fandefasana ny vokatra, na mety, na inona na inona antony, mandà ny hanaiky ny kaontinao na ny ampahany amin'ny baiko. Tsy misy baiko heverina ho eken'ny Chipsmall raha tsy efa nalefa ny vokatra. Raha tsy manaiky ny kaomandinao izahay, dia hanandrana hampandre anao izahay amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka na fampahalalana mifandraika hafa nomenao niaraka tamin'ny baikonao.
2. Fifandraisana elektronika.
Rehefa mametraka kaonty amin'ny alalàn'ny tranokala ianao, dia takiana aminao ny hanome adiresy mailaka manan-kery, izay azonay ampiasaina hampiresahana aminao momba ny satan'ny kaomandinao, hanome toro-hevitra anao momba ny fandefasana vokatra voamarina, ary hanome anao ny naoty hafa , fampahafantarana na fifandraisana hafa mifandraika amin'ny baikonao.
Ny fitanisana an-tranonkala Chipsmall sy ny serivisy mifandraika amin'izany dia kajy amin'ny dolara amerikana sy ny fametrahana ny vola, raha toa ka tsy ao anatin'ny faratampon'ny fampiasana mpanjifa nasionaly na isam-paritra ny vola amerikana, azafady mifanakalo ny fiovam-po mifanaraka amin'ny fireneny manokana na faritra. Ny vidiny rehetra dia amin'ny dolara amerikana.
4. Fampahalalana momba ny vokatra.
Tranonkala Chipsmall karazana vokatra, famaritana ny vokatra ary ny masontsivana, ny sary mifandraika amin'izany, ny horonan-tsary ary ny fampahalalana hafa dia omen'ny Internet sy ireo mpamatsy mifandraika amin'izany, ny tranokala Chipsmall dia tsy miantsoroka ny andraikitra amin'ny maha-marina ny fahamarinana, ny fahamendrehana, ny ara-dalàna na ny maha-izy azy. Ankoatr'izay, ny tranokala Chipsmall na ny fampiasana ny fanomezana orinasa fampahalalana sy ny loza mety hitranga amin'ity tranonkala ity dia tsy mandray andraikitra.
Chipsmall dia manolotra ireo fomba fandoavam-bola marobe mety amin'ny dolara amerikana, ao anatin'izany ny PAYPAL, Card Credit, Master Card, VISA, American Express, Western Union, Wire Transfer. Ny fandoavana dia tsy maintsy atao amin'ny vola nametrahana ny filaminana. Raha manana fepetra fandoavam-bola hafa ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa Chipsmall ao amin'ny [email protected]
6. Fiampangana fandefasana.
Ny saram-pandefasana na ny fandefasana entana, ny fiantohana ary ny haba amin'ny doany dia halain'ny mpanjifa.
Ho an'ny famindrana tariby dia mitaky vola $ 35.00 amin'ny banky izahay, ho an'ny PAYPAL sy ny carte de crédit dia mandoa 5% ny sandan'ny serivisy amin'ny vidiny rehetra izahay, ho an'ny sendika Andrefana tsy misy sarany amin'ny banky.
8. Karama fitantanana.
Tsy misy ny kaomandy ambany indrindra na ny sarany fikirakirana.
9. Politika fanimbana entana sy fiverenana.
Raha mahazo varotra simba amin'ny fitaterana ianao, dia ilaina ny mitazona ny baoritra fandefasana, ny entana ary ny ampahany. Mifandraisa azafady amin'ny serivisy mpanjifa Chipsmall mba hanombohana fitakiana. Ny fiverenana rehetra dia tokony hatao ao anatin'ny 30 andro aorian'ny datin'ny faktiora ary ampiarahina amin'ny nomeraon'ny faktiora tany am-boalohany, taratasy fanamarinana kara-piantohana, sarin'ny ampahany ary fanazavana fohy na ny tatitra momba ny anton'ny fiverenana. Tsy ekena ny fiverenana aorian'ny 30 andro. Ny entam-barotra naverina dia tsy maintsy ao anaty fonosana am-boalohany sy amin'ny toe-javatra azo averina. Ireo ampahany naverina noho ny hadisoan'ny mpanjifa tamin'ny ora nalaina na amidy dia tsy ho ekena.
10. Olana amin'ny fadin-tseranana.
Ny fividianana Chipsmall dia vidin'ny FOB, tsy tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana ho an'ny firenenanay izahay raha toa ka voatazona na nalain'ny fadin-tseranana ho an'ny mpanjifa ny ampahan'ny mpanjifa, Chipsmall dia afaka manome antontan-taratasy ho an'ny mpanjifa, fa i Chipsmall kosa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahazoan-dàlana, tsy mandoa haba i Chipsmall Ny adidy dia adidin'ny mpanjifa rehetra ny manadio ny ampahany amin'ny fadin-tseranan'ny mpanjifa. Tsy halefa indray ny Chordsmall raha nisy ampahany nitazona na nalaina tao amin'ny fadin-tseran'ny mpanjifa, tsy misy ny famerenam-bola.
11. Adidy sy andraikitra.
Chipsmall dia sehatra ara-barotra B2B sy B2C matihanina, ary ny ivelany ihany no azontsika jerena, fa tsy ny fiasa anatiny. Ny fiverenana ao anatin'ny 30 andro dia ekena, na izany aza, ny mpanjifa dia tsy manan-jo hanenjika an'i Chipsmall noho ny entana tsy mandeha ary tsy manan-jo hangataka onitra fanampiny. Chipsmall dia sehatra serivisy, tsy mpanamboatra izahay fa manome ny serivisy fotsiny ary manampy ny mpanjifa hividy ny vokatra ilain'izy ireo. Chipsmall dia miaro ny zon'ny fanazavana farany.